SIDA LOO ILAALIYO KAROOTADA ILAA GUGA WAA CUSUB: NOOCYADA NOOCAN OO KALE AH AYAA LA JIIFSAN KARAA JIILAALKA, IYO SIDOO KALE SIYAABO LAGU ILAALIYO DALAGGA GURIGA - KHUDRADDA
Isticmaalka maalinlaha ah ee dabacasaha ayaa xoojin doona indhaha, dib u jaji wejiga, kordhinta difaaca. Su'aashu waa sida loo keydiyo karootada guriga dhexdiisa xilliga jiilaalka.
Karootadu waxay leeyihiin qaab adag, qoryo leh oo leh asal qeexan oo jilicsan. Khudaarta cagaaran waxay ku badan tahay fiber, sonkor iyo borotiino.. Awoodda unugyada waxay ku xiran tahay xaddiga fiber, sonkorta waxaa loo isticmaalaa unugyada nuugista inta lagu jiro kaydinta, iyo borotiinku waa isku xidhan yihiin biyaha. Dhamaan arrimahan ayaa ka hortagaya isdabajooga iyo duufaanta xaaladaha qaarkood ee kaydinta, waxay gacan ka geystaan ​​tayada haynta alaabta.
MUHIIM! Xaaladaha kaydinta karootada: meel madow oo leh qoyaan qaraabo ah ilaa 90%, heerkulku waa inuusan ka badnayn 5 darajo (wixii faahfaahin ah ee heerkulka kaydinta looga baahan yahay dabacasaha, halkan ka akhriso).
Noocyada ugu fiican ee jiifan kara ilaa guga
Qeybta ugu badnaan, karootada bartamaha iyo dabacasaha dabadheeraha ah ayaa ka fiican. Xididdooyinkan waa kuwo waaweyn oo dheer, miisaankoodu yahay ilaa 200-230g, konik ama cylindrical. Laakiin xilliga cimilada cimilada, marka xagaaga dambe ama xilliga dayrta, noocyada dambe ma heystaan ​​wakhti ay ku rusheeyaan oo ku ururaan sonkorta iyo fiber. Noocyada hore waxaa lagu kaydiyaa si ka fiican xaaladaha noocaas ah.
Dabacasaha dabacsan ee dhirta, ku habboon kaydinta (nolol shafka ah in ka badan lix bilood, oo ku xiran xaaladaha lagama maarmaanka ah):
Boqoradda xilliga dayrta - dalagyada xididku waa macaan, casiir leh, qallalan, oo ku haboon dhammaan noocyada wax soo saarka, tayada tayada muddada mudista;
Vita Long - caan ku ah maadooyinka sare ee carotene iyo wadnaha yaryar, oo qaab wanaagsan oo nooc kasta ah, laakiin gaar ahaan ku habboon casiirka;
Boqortooyada - inta lagu jiro kaydinta noocan ah waxay hagaajineysaa guryaha, waxay soconeysaa ilaa toddoba bilood.
Noocyo dabiiciga ah ee xilliga-dhexe (nolosha shafka ilaa lix bilood, oo ku xiran xaaladaha lagama maarmaanka ah):
fitamiin - noocyo aad u macaan, xidido leh asal yaryar iyo walxaha sare ee carotene iyo vitamiin;
kuwa aan la barbardhigi karin - fasalka haysta tayada dhadhanka wanaagsan, waxay ku haboon tahay cuntada carruurta iyo cuntada.
Noocyada Bisaylkiisa Hore (Nafaqada ilaa afar bilood oo ku xiran xaaladaha saxda ah):
Alenka - dalagyada xididku waa yar yihiin, macaan, casiir leh;
Karootiga Paris - khudaarta cawska ah ee wareegsan, aad u macaan, noocyada kala duwan ee macmacaanka, macmacaanka macaan.
Waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan noocyo ku habboon ee dabacasaha iyo muddooda kaydinta halkan, iyo halkan waxaan kuu sheegay nooca noocyo of karootada waxay ku haboon yihiin kaydinta muddada-dheer.
Khudaarta cagaaran waa in la diyaariyaa ka hor kaydinta.:
Waxay faa'iido u leedahay laba toddobaad ka hor inta aan la goynin si biyo ah sariiraha si ay khudaarta u buuxsamaan qoyaan, noqdaan kuwo casiir leh, macaan iyo jilicsan.
Karootada cusub waxay u baahan tahay inay kala soocdo, ka saarto jejebka, xididdada waxyeellada leh.
Ku dhaq, karootada qalalan hawada.
Iska yaree dushooda, ka tegaya cawska aan ka badnayn mitirimitir, iyo talooyin dheer (waxaad ka akhrisan kartaa dabacasaha kahor intaan lagu kaydin maqaalkani).
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo diyaariyo dabacasaha loogu talagalay kaydinta xilliga qaboobaha, waxaad ka heli kartaa halkan.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu hayn karo dabacas cusub xilliga jiilaalka.. U fiirso si faahfaahsan.
Khudaarta diyaarka ah waxaa lagu meeleeyaa saf ku yaal sanduuq, dabool leh dabool leh oo lagu qaado balakoonka balbalan.
Waxaad xididdada ka saari kartaa sida balka.
Waxaa fiican inaad doorto sanduuq alwaax leh derbi adag, oo aan lahayn godad.
Dareeruhu wuxuu ku yaallaa balakoonka ilaa dhaxanka ugu horreeya, ka dibna sanduuqa waxaa la geeyaa guriga wuxuuna ku tagay meel qabow (tusaale ahaan, meel u dhow albaabka barkada ama godadka), ka fogaan qalabka kuleylka.
Haddii aad sanduuqa ku dhejiso weel daboolan, karootada ayaa laga tegi karaa balakoonka xilliga jiilaalka.
Caawin! Habka balcony wuxuu xaqiijiyaa ammaanka qudaarta ilaa afar bilood.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo dhigo dabacasaha jiilaalka balakoonka, halkan ka akhriso.
Karootada waxaa lagu dhajiyay hal xaraf oo ku yaalla xaashid ama saliida iyo shisheeye alwaax ah. Sidan waxaad ku kaydin kartaa khudaarta muddo seddex ilaa afar bilood ah. Khudaarta cagaaran waa inaysan taaban midba midka kale.
In mashka dhoobo
Nidaam lagu kalsoonaan karo si loo xaqiijiyo badbaadada ilaa toddoba bilood.
Marka diyaarinta dabacasaha, ma'aha lagama maarmaan in la dhaqo, waa ku filan inay si taxaddar leh uga nadiifiso lakabka qaro ee dhulka.
Dhuxulku wuxuu ku qulqulayaa biyo si joogta ah ee kareemka qaro weyn oo si taxaddar leh leh, si aaney u waxyeeleynin xididada, karootiga joodariga ah, la qalajiyey hawada iyo ku rid bacyada blaastikada ama sanduuqyada kartoonada.
Waxaad xidhan kartaa xididada hoose ee dheri dhalaalaya oo ku shub dhoobo dareere ah, ha ku qallajiso hawada iyo, haddii loo baahdo, jiifiso safka xiga ee xididdada, ka dibna ku shubaya dhoobo.
Dabacasaha maydhay waxaa la dhigayaa bac caag ah waxaana loo diraa qaboojiyaha, sanduuq khudaar ah oo khudradda hoose ah. Nolol maalmeedka ilaa labo bilood.
Sida loo keydiyo dabacasaha qaboojiyaha, si aaney u dhicin, waxaad ka heli kartaa halkan.
Golaha Guryaha ayaa mar walba ku qaboojiya meel kasta oo ka mid ah aqalka.
Karootada waxaa lagu keydin karaa qolkan, ka hor inta aan la dhigin boorsada dusha ama sanduuqa oo lagu rusheeyaa xaabada alwaax.
Waxaad ku ridi kartaa berked dhalaalaya, ku dhog balka iyo ku dabool maro suuf ama shukumaan.
Iyada oo habkan, karootada waxaa lagu kaydiyaa laba ilaa saddex bilood.
Kadib waxaad arki kartaa fiidiyowga, oo sheega sida loo keydiyo dabacasaha dabka:
Habka ugu fudud uguna kalsoonaan karo. Karootada diyaarsan oo ay suuxaan ku rusheeyeen huurka, ku rid bacyada blaastikada waxaana loo diraa qaboojiyaha.
Badbaadada ilaa 12 bilood. Hal daroogo - qaabkan khudradda ayaa badanaa ku habboon oo keliya daaweynta kulaylka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo xareeyo dabacasaha, halkan ka akhriso.
Haddii khudradda aan wakhtigooda la soo qaadin, ka dibna khudradda cagaaran ama jirran ayaa waxyeeleyn kara wax kasta oo kale.
Marka heerkulku isbedbedello (tusaale ahaan, jikada), biqilka dabacasaha waa suuragal, taas oo gaabin doonta nolosheeda shelf.
Karootada - dukaanno fiitamiin iyo macdan. Way fududahay in la hubiyo ammaankeeda Maqsinka, laakiin maqnaanshaha waxaa suurtagal ah in la ilaaliyo dhadhanka iyo casriyeynta khudradda xididka leh muddo wakhti ku filan oo guriga ah.
Laakiin ha ilaawin in dabacasku uu hayo hantidiisa faa'iido oo keliya dhowr saacadood ka dib markii laga saaray sariirta. Iyada oo kaydinta muddada dheer, isticmaalka dalagyada xidid waa la keydiyay kaliya rubuc.